Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo FS isku soo dhiibay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo FS isku soo dhiibay
Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo FS isku soo dhiibay
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ay sheegeen in uu Ciidanka isku oo dhiibay Sarkaal ka tirsan Ururka Al-Shabaab,kaa so ka howlgalayay degaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Taliyaha Guutada 16-aad ee danab G/le Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa sheegay in Sarkaalka oo lagu Magacaabo Maxamed Abukar Maxamed Dhagoole uu Al-Shabaab u qaabilsanaa Maaliyadda Gobolka Shabellaha Hoose,isla markaana uu isku soo dhiibay Ciidanka DANAB ee xoogga dalka Soomaaliyeed.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in Sarkaalkaas uu u sheegay in kadib markii uu u adkeysan waayay dhibaato uu sheegay inay Al-Shabaab ku hayaan dadka Shacabka ah uu go’aansaday in uu isaga soo baxo Al-Shabaab waa sida uu hadalka u dhigay.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay Taliyaha Guutada 16-aad ee danab G/le Ismaaciil Cabdimaalik Maalin in Sarkaalka ka tirsanaa Al-Shabaab ay ku wareejiyeen Hay’adaha kala duwan ee Amniga Dowladda Somaaliya,waxaana Xubnaha kale ee ka tirsan Al-Shabaab uu ugu baaqay inay dowladda isku soo dhiibaan.
Saraakiisha kala duwan ee Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa siyaabo kala duwan waxaa ay u shaaciyaan inay isku soo dhiibeen Saraakiil kala duwan oo ka tirsanaa Dowladda Soomaaliya ama Al-Shabaab.
Maqaal horeShirka Golaha Wasiirada Galmudug oo xalay ka qabsoomay Balanbale
Maqaal XigaDuqa Muqdisho oo ka qeyb galay kulan lagu taageerayay Xildhibaanada golaha Shacabka